Abakhiqizi be-Glass Medicine / Jar, abahlinzeki - I-Glass Glass Bottle / Jar Factory
100ml Amber ingilazi umuthi isiraphu ibhodlela nge tamper cap sobala
Ibhodlela lethu lesilazi le-100ml le-amber glass kanye ne-cap-proof proof inesimo sebhodlela lomuthi wendabuko futhi ilungele izixazululo eziningi zemithi namakhemikhali nama-syrups. Uma udinga ikhava yokuphazamisa ukuvimbela izingane ukungena, kufanele ucabangele ukuyisebenzisa.
1ML Amber Glass Amabhodlela ane-Glass Eye Dropper Dispenser yeSampula Vial Encane Ebalulekile Ibhodlela Lamafutha
Ubukhulu-ukuphakama 1.3 amayintshi, ububanzi 0.6 amayintshi (kufakwe i-dropper).
Kulula ukukhombisa amasampula kumakhasimende, ayasebenziseka ekupakisheni kabusha, ngakho-ke udinga kuphela okudingayo usohambeni.
Ibhodlela lifaka i-dropper eyakhelwe ebhodleleni lamabhodlela ukuze kube lula, ukukhipha okuphelele nokuhanjiswa okunembile kwemithi ewuketshezi, imithi, amakhambi kanye namafutha abalulekile e-aromatherapy.
Sula Amabhodlela e-Glass Pump, Ingilazi Pump Amabhodlela Shampoo, Amabhodlela e-Glass Lotion Nge Pump, Amabhodlela e-Glass Pump Amafutha Abalulekile, Glass Bottle Nge Spray Pump, Glass Bottle Nge Pump Idivaysi ekhipha,